U diyaari dhulka beertaada cusub | Bezzia
U diyaari dhulka beertaada cusub
Haddii aad leedahay beer oo aad rabto in aad u hurto qayb yar oo ka mid ah beero khudaarJiilaalku waa wakhtiga ugu fiican ee shaqada lagu tagi karo beerta. Waxaad heli doontaa wakhti ma aha oo kaliya inaad qorsheyso, laakiin si aad u diyaariso dhulka, ka hor intaanad beeran wakhtiga Abriil.
Inaad ku raaxaysato beerta khudaarta ee beerta waxay u baahan tahay qorshe. Ogaanshaha beertaada waxay fure u noqon doontaa go'aaminta midkee meesha ugu haboon in la dhigo beerta beerta bilaabay in ay dhawraan! Marka la go'aamiyo, kan kale wuxuu ka iman doonaa shaqada wasakhaysan; u diyaari oo hagaajiso dhulka. Liiska hawlo dhan oo aanu maanta kula wadaagno.
1 haramaha ka saar
2 Aqoonso nooca ciidda oo hagaaji
3 Aeerka oo ku dara maadada organic
4 dariiqa jeex
haramaha ka saar
Marka la doorto goobta beerta iyo ka hor shaqo kale, waxay noqon doontaa lagama maarmaan nadiif ah. Haddii ay tahay meel bannaan oo aan la rabin muddo dheer, waa inaad wax ka qabato haramaha. Iyadoo haddii aad hore u isticmaali jirtay booskan, waxay u badan tahay inaad u rari doonto dhirta ku jirta meel kale.
Waa muhiim in la saaro dhirta waaweyn si aysan u gelin u dagaalanto kheyraadka biyaha oo leh dhirta cusub ee beerta. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noqon doontaa muhiim in la tirtiro kuwa mararka qaarkood si liidata loo yaqaan cawska. Fikradda waa in iyaga laga saaro xididdada leh dalool yar inta ay weli yar yihiin oo aysan bixin wax badan oo iska caabin ah. Waxay u muuqdaan inay soo baxaan dhowr maalmood oo roob ah ka dib, markaa kani hawshiisa ha qabsado oo ha qabsado wakhtiga.
Aqoonso nooca ciidda oo hagaaji
Ogow sifooyinka ciidda Waa lagama maarmaan in la sameeyo go'aamo gaar ah oo ku saabsan noocyada dhirta, xaaladaha waraabka ama waxa aad samayn karto si aad u hagaajiso sifooyinkeeda. Noocyada ugu waaweyn ee ciidda waa laba:
ciid bacaad ah: Waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo ka weyn kuwa carrada kale, waxay ogolaataa daadgureynta degdega ah ee biyaha. Awoodda yar ee biyaha lagu ceshan karo waxay sababtaa jiidista nafaqooyinka iyo carradu saboolnimada, si ay mudnaanta kuwani u noqdaan kuwa ugu fiican ee beerashada. Si kastaba ha ahaatee, ogsijiinta xididada waa mid sare, faa'iido dhab ah!
Ciidda dhoobada Waa carro cufan oo cufan, lehna awood sare oo ay ku ceshadaan biyaha iyo sidoo kale nafaqooyinka jira, taas oo ka dhigaysa mid bacrin ah. Awoodda lagu hayo biyaha, si kastaba ha ahaatee, waxay si toos ah u saamaysaa ogsijiinta iyo caafimaadka xididdada. Waxay u taagan yihiin caqabad aad u adag laakiin waa kuwa ugu badan ee lagu taliyay nuxurka nafaqo ee sarreeya.
Beerihii beerta ayaa laga raadsadaa Hel dheelitirnaan ku habboon inta u dhaxaysa ciidda bacaadka ah iyo dhoobada, sida caadiga ah, iyada oo la tixgelinayo ciidda bilawga ah iyo waxa ay "u baahan tahay", dhoobo, perlite ama fiber qumbaha ayaa lagu daraa si looga faa'iidaysto.
Aeerka oo ku dara maadada organic
Cusbooneysii oo Ogsajiin sii dhulka waa hawlaha lagama maarmaanka ah ee beerta. Si loo fuliyo iyaga, ciiddu waxay noqon doontaa qoyaan. Waxaad si fiican u qoysin kartaa dhowr maalmood ka hor intaadan bilaabin shaqada ama waxaad ka faa'iideysan kartaa maalmaha qorraxdu ka dib dhowr maalmood oo roob ah. Xusuusnow, haa, ha samaynin marka ay qoyan tahay si aanay u bixin iska caabin badan.
Marka wakhtigu yimaado, fikradda waa in hareeraha la qodo 20 ama 25 sentimitir u jirta dusha sare beerashada oo ka saaraysa dhammaan dhulkeeda si qayb ka mid ah loogu daro walxaha organic ka dibna dib loogu celiyo goobta beerashada. In kasta oo aad sidoo kale ka saari karto sentimitirka ugu horreeya ee ciidda oo aad si toos ah u walaaqi karto iyo marka aad ku daadiso walxaha organic. Waxaad ka heli doontaa farsamooyin kala duwan oo lagu sameeyo youtube.
Waxaa jira dhowr farsamo in hagaajinta hantida dhulka ka faa'iidaysiga walxaha dabiiciga ah ee aad ka soo saarto guriga. Labada ugu caansan waa ka dhigid iyo vermicculture, inkasta oo aad sidoo kale isticmaali karto compost ama digada engegan ee ganacsiga si aad u hodmiso ciiddaada.
Marka aad hawada nadiifiso oo aad hagaajiso ciidda, waa markii aad simi lahayd dhulka koraya. Ujeedadu waa in dhulku soo bandhigo muuqaal fiican iyo muuqaal siman. Halkaa marka ay marayso waa inaadan helin wax dhoobo ah oo dhulka ah, laakiin haddii aad mid hesho, waxay noqon doontaa wakhtigii aad iska tuuri lahayd.
Oo dhulka ma diyaarisay? hadda ku bilow qorshee dalagyada aad beeran doonto dhexdeeda iyo halka aad mid walba dhigi doonto, si ay dhammaantood uga faa'iidaystaan ​​dhaqdhaqaaqa qorraxda ee beertaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » U diyaari dhulka beertaada cusub
'The Golden Age', riwaayad taariikheedka cusub ee HBO MAX
Digir cad oo leh cod iyo caleen